SAYINA ILIBRA: UKUPHONONONGWA KWEALBHAMU YOLWANDLE - IINDABA
Ulwandle ukuya kuLwandle
Usebenzisa iphalethi enomdla ye-chintzy synths kunye nezinye izandi ezikufutshane nobudala obutsha, umvelisi waseLatvia uhlawula imbeko kwiilwandle zenyanga-kunye namandla abantu okumangalisa.
Dlala iTrek Ulwandle lweNectar -Sayina iLibraUkuhamba Ibhendi / Thenga
UAgata Melnikova ungumphuphi. Emuva xa wayehlanganisa Kufutshane neIkhweyitha , ukuqala kwakhe ngo-2016 njengoMqondiso weLibra, wayenqwenela ukuphuma kwilizwe lakhe laseLatvia kwaye atyelele imozulu yetropiki ekhuthaze umculo awayewenza. Ukungabikho kwemali yokuhamba, wafumana enye imithombo yovuselelo loyilo: Amaxwebhu endalo e-BBC kunye nezandi zamahlathi emvula kwiYouTube.
Vula Ulwandle ukuya kuLwandle , Icwecwe lesibini likaMelnikova, amehlo akhe ajongisa kwindawo ekude kakhulu: inyanga-ngokukodwa, iilwandle zayo. Ngokudibeneyo eyaziwa ngokuba yiLunar Maria, la mathafa entaba-mlilo kungenzeka athimbe abantu okoko abantu bamandulo bajonga phezulu esibhakabhakeni sasebusuku kwaye baqala ukuqaphela loo mabala makhulu amnyama kumphezulu wenyanga.
Umoya ofanayo wokumangaliswa uyahamba Ulwandle ukuya kuLwandle . Inye yeendlela zayo ezisithoba ibizwa ngegama lehashe elahlukileyo lenyanga, kwaye nangona ngoku siyazi ukuba inyanga yindawo ebandayo, engwevu, kwaye engenabomi, iMelnikova ithatha indlela emnandi ngakumbi, ikhupha ixesha apho abantu babecinga ukuba luhlaza oluncinci. amadoda ayezula apho phezulu. Sayina umculo weLibra oqaqambileyo kwaye unemibala, nangona eshiye ubukhulu becala izandi ze-woozy zeBalearic Kufutshane neIkhweyitha . Endaweni yoko, uthintelwe kuhlobo olufanayo lokuphupha, iphalethi yobudala obutsha obuphezulu obuchazwe ngabazobi abanjengeCFF kwiminyaka yamuva. Kukho ukungaziva okuhlekisayo okukhoyo Ulwandle ukuya kuLwandle Ii-chintzy synth melodies, ii-strings ezikrwitshiweyo, kunye ne-faux woodwinds-nokuba sele bethutha u-Ryuichi Sakamoto -kodwa ukwamkela kuka-Melnikova iinkampu zabo kunenjongo ngokucacileyo.
Kwi ividiyo kukhokelela kuLwandle olunye lweZiqithi, yena uyathandeka kwiimagi zekhamera, edlala ikhibhodi yakhe kwaye ejikeleza i-surreal, phantse i-Dali-esque iseti ngeentshukumo eziphakathi kwendawo yokusebenza kwezobugcisa kunye ne-60's crazes Qubha . Inkqubo ye- ikliphu kuba uLwandle lwe-Nectar alunangqondo ngakumbi, njengoMelnikova, okhethwe kwi-beret kunye neigloves ezimhlophe, ehamba ngendlela yakhe ngokusebenzisa i-hypnagogic rave enye, ngamanye amaxesha edityaniswa ngumdlali we-saxophone ongafakwanga emzimbeni. Akukho buqhetseba kwaye akukho kugxeka, yinto nje ehlekisayo efana nomntwana eyenza ukuba umculo uzive ukhanye ngokungenakwenzeka ezinyaweni zawo.
Ukongeza kwelinye ilizwe lelizwi likaMelnikova, yenye yezona zinto zibalulekileyo kwi-albhamu. Kunqabile ukusebenzisa amagama ayinyani, uMelnikova ubukhulu becala unxibelelana neengoma ezimyoli kunye nokusebeza okunesithunzi, nangona engekho ngaphezulu kokuqhambuka ngamanye amaxesha kwe-baritone okanye ububhanxa besingqisho. KuLwandle lweZiqithi, iziqwengana zelizwi lakhe ziye zalungiswa ukuze zivakale ngathi zingumjelo wamanzi, ofana nomculi we-dugeridoo okanye umqala waseTuvan. Ngokuchaseneyo, kuLwandle loBukrelekrele uthatha umphefumlo oguqukayo omculo ophuma kwilizwi lawo usikhumbuza, nangona kungqinelana, ngeLa Roux ka-2009 yatshayisa i-Kill, njengoko yaxutywa nguSkream.
Ngokubanzi, nangona kunjalo, ubukho bukaMelnikova buyathuthuzela. Nokuba uyaphola ngobunono (uLwandle lokuZola), ufumana isimilo kunye nobugqwirha (uLwandle lokuZola) okanye ujikeleze ilizwi lakhe kwikwayala yokunqula eyahlukeneyo (Sea of ​​Fecundity), kukho into ehehayo ngelizwi lakhe kunye nezinto ezininzi ezenziwayo. Ukuthelekiswa kwamagcisa anjengoEnya noKate Bush kuyalingwa, kodwa ukhetho lukaMelnikova lukwakhumbula nomoya ombi womsebenzi wokuqala kaGrimes.
Oko kudlala yeyona nto iyenzayo Ulwandle ukuya kuLwandle ukuphulaphula okunomvuzo. Nangona uMelnikova ngokuqinisekileyo engenguye umculi wokuqala ukuphinda angene kwiminyaka yama-80s entsha kunye ne-globe-trotting postmodernism, ungomnye wabambalwa abasondele kubo benoburharha bokwenyani. Ulwandle ukuya kuLwandle ayisiyonto yokuhlekisa, kodwa yenziwe ngumntu obonakala ngathi uyaqonda ukuba kukho umda wokuba umntu anganobuzaza kangakanani xa ecula kwi-spa-friendly suite yeepan flute kunye ne-gauzy synths. Kuninzi okumnandi kulo mculo, kwaye iSign Libra ibonakala ngathi ikulungele ukwabelana ngayo.
Iindidi zabadlali berekhodi
UFlorence + umatshini wemiphunga
iingozi zobuqhetseba zothando
Amanqaku amathathu nenyaniso
lil tjay imeko kaxakeka